NK | हिजोका बालकलाकार को-को हिट ?
हिजोका बालकलाकार को-को हिट ?
प्रकाशित मिति: १५ कार्तिक २०७६, शुक्रबार
काठमाडौं :- पछिलो समय चलचित्र क्षेत्रमा कलाकारहरुको लर्को नै लागेको देखिन्छ । आफु पर्दामा बिके पनि नबिके पनि युवा पुस्तामा फिल्मी क्षेत्र मोह अधिक पाईन्छ ।
कुनै कलाकारको भाग्य बलियो देखिन्छ एउटै फिल्मबाट चर्चा कमाउँछन भने कुनै कलाकार जति मेहनत गरे पनि जहिको त्यही देखिन्छन् त कतिपए पलाएन नै हुन्छन् । तर कुनै कलाकार भने यस्ता छन् सानै उमेरदेखि यो क्षेत्रलाई अपनाएर अहिले सम्म टिकि रहेका मात्र छैन्न कि अझै पनि दर्शकको माझमा त्यतीकै लोकप्रिय छन् । हिजोका बाल कलाकार आजका दर्शको प्रिय छन् । जस मध्य केहि कलाकारको बारेमा चर्चा गरौं ।
प्रियंका कार्की पनि नेपालकी अहिलेकी सबैभन्दा डिमान्डेड हिरोइन हुन् । अहिले उनकै सिजन चलिरहेको छ । राम्रो फ्यान फलोइङ पाएकी प्रियंका एकाएक फिल्म क्षेत्रमा आएर चर्चा बटुलेकी भने होइनन् । उनी पनि बालकलाकारकाका रुपमा नेपाली चलचित्रमा निकै अघि देखिइसकेकी थिइन् ।
सात वर्षको उमेरमा ‘महादेवी’ चलचित्रमा बाल कलाकारका रुपमा झुल्किएकी प्रियंकाले विभिन्न चरणमा संघर्ष गर्दै आज ‘नम्बर वान’ नायिकाको स्थान पाएकी छिन् । बालकलाकारका रुपमा उनले खासै चर्चा नपाए पनि आज हिरोइनका रुपमा सर्वाधिक चर्चापरिचर्चा बटुल्न सफल भएकी छिन् ।
अमेरिकाबाट वैवाहिक जीवन त्याग गरेर फर्किएकी प्रियंका अहिले आफ्नो प्रेम सम्बन्धले पनि विशेष चर्चामा छिन् । तर, उनको चर्चा सबैभन्दा ब्यस्त नायिकाकै रुपमा बढी छ ।
संयम अहिले मात्रै हैन, बाल कलाकारको रुपमा गर्दा पनि हिट नै थिए । आफ्नो मान्छे, दोमन, कर्तब्य, आफ्नो घर आफ्नै मान्छे, लगायत दर्जनांै फिल्ममा उनी बालकलाकारका रुपमा काम गरेका थिए । ‘सायद’ बाट लिड रोलमा आएका संयमले आभास, पुन्टेपरेड, लबसब लगायतका चलचित्रमा नायकका रुपमा अभिनय गरिसकेका छन् । केही समययता नयाा फिल्ममा नदेखिएपनि उनलाई पछ्याउने दर्शकको भने कमी छैन ।
मुख्य भूमिका पाउनुअघि बालकलाकारमा रुपमा पहिल्यै पर्दाका देखिएका कलाकार यति मात्रै भने होइनन् । अरु पनि धेरै कलाकारहरु छन्, जो बाल उमेरमै फिलम क्षेत्रमा आएका थिए । आज पनि उनीहरु यही क्षेत्रमा करिअर बनाउन संघर्ष गर्दैछन् ।
हे प्रिया आउ संगै यात्रा गरौँ…